Resaky ny mpitsimpona akotry : mba moramorao ihany dada a… | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mba moramorao ihany dada a…
Tapaka nanomboka omaly ny lalana nahafahana nieritreritra ny ahatafidirana ho isan’ny Loholon’i Madagasikara. Efa vita tamin’ny 29 desambra teo ny fifidianana ireo sahy nirotsaka hifaninana nefa nifarana omaly ihany koa ny hirika ahazoan-toerana amin’ny alàlan’ny fahamoram-pon’ny Filoham-pirenena izay manan-jo hanendry ny ampahatelon’ny Loholona.
Niteraka resabe tahaka ny fifidianana rehetra nisy teto amin’ny firenena ny an’ny Loholona izay natokana ho an’ny mpifidy lehibe ka tsy nampandraisana anjara ny valalabemandry. Tsy nampiova zavatra anefa ny sokajin’ny mpifidy nampandatsahana vato fa vao mainka nampifampiahiahy. Nifandimby niaka-tsehatra, naneho hevitra nikasika ny fifidianana sy ny vokany ireo nitonona ho tompon’andraikitra ara-pôlitika isanisany, ankoatry ny fametrahana antontan-taratasy fanoherana tany amin’ny Fitsarana mahefa mahakasika ity raharaha ity. Litania nitovitovy hatrany no niverimberina tamin’ny fampahalalam-baovao namoahan’ireo mpitaraina ny alahelony. Nisy hosoka sy hala-bato tany aminay, hoy ny sasany. Nisiana faneriterena sy fandrahonana ny an’ny hafa. Notaterin’ny mpanao pôlitika maro koa fa nofafazana vola mialoha ny mpifidy… Vaky taraina ny rehetra tsy nahazo antoka sahady ny hahatafiditra olona ao amin’ity Antenimiera vao hatsangana ity. Nangina, tsy naharenesam-peo kosa, tetsy an-daniny, ireo nihevi-tena ho nahomby tamin’ny fifidianana natrehiny.
Moramorao ihany anefa ry Dada fa sao mandrora mitsilany amin’ny fiampangana tsy voahevitra mialoha satria mety tsy ny ampangaina no ho voany fa ny mpiampanga mihitsy no hafokain’ny olona. Ny heverina ho matotra sy itokisana indrindra ao anaty antoko na fikambanana ihany no tsy maintsy arotsaka amin’ny fifidianana ka ho tonga mpifidy vaventy toy ny ben’ny tanàna sy ny mpanolontsainy. Fahapotehan’ny antoko ny fivadiham-pitokisan’ny mpifidy vaventy na ny tsy fahafantarany ny tokony ho fidiany. Ho loza tokoa mantsy raha ny sira mihitsy no tonga matsatso… Tsy resy lahatra ara-potokevitra amin’izay antoko nialokalofany ny “olobe” natolony hisolo tena azy any anaty fitantanan-draharaham-panjakana matoa voavidim-bola na andairan’ny fandrahonana sy ny teritery. Tombontsoa manokana na tahotra koa angamba no nidirany tao aminao ry Dada matoa mbola ao anatin’izany izy mandrak’androany ka mandinihy tena. Mamehy tena amin’izay nijoroany ny olombelona vory saina fa tsy atao am-patorana tahaka ny omby ka atahorana hovahan’ny hafa.
Mangotsoka ny voafitaky ny nantenaina ry Dada nefa aza atao ho fantatr’olona ny fahavoazanao sao vao mainka ihomehezany. Aza entim-po fa mba zakao mora eny ihany ny alahelo ê!